ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဦးဆံုး အမိုက္စား ဘီယာေသာက္ျပိဳင္ပြဲၾကီး - ဒိုးမယ်
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဦးဆံုး အမိုက္စား ဘီယာေသာက္ျပိဳင္ပြဲၾကီး
ဘီယာသောက်တာ စကေးကြမ်းတဲ့ သူတွေ အတွက် သတင်းကောင်းဗျို့။ နိုင်ငံတကာမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ဘီယာသောက်ပြိုင်ပွဲကြီးတွေကို သဘောကျပြီး ယှဉ်ပြိုင်ချင်နေတဲ့သူတွေအတွက် အခုဆိုရင် Doemal က နေ ကိုယ့်ရဲ့ စကေးကျတဲ့ ဘီယာသောက်စွမ်းရည်ကို ရန်ကုန်မှာတင် ပြလို့ရတဲ့ ဘီယာသောက်ပွဲတော်ကြီး တစ်ခုကို အောက်တိုဘာလထဲမှာ ကျင်းပသွားမှာပါ။ ဒီပွဲကတော့ DOEMAL BEERFEST ပွဲတော်ပါ။
ဒီပြိုင်ပွဲကဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆူံးအကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဘီယာသောက် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါ။ ဒီပွဲကို အဓိက ကျင်းပရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မွန်းကြပ်လှတဲ့နေ့စဉ် ဘဝကြီးကို ခဏမေ့ပြီး ဘီယာကြိုက်သူတွေအချင်းချင်း စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ပျော်ပျော်ပါးပါး ဘီယာတွေ တဝသောက်ရင်း ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်လေးတွေကို ဖန်တီးပေးချင်တာပါ။
တကယ်လို့ ပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်လည်း ဆုုကြေး ၁၀ သိန်းတောင် ပေးမှာ နော်။ ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ဖို့့ စိတ်ဝင်စားလာပြီ ဟုတ်???။
DOEMAL BEERFEST ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ Round3Round နဲ့ယှဉ်ပြိုင်ပြီး အနိုင်ရရှိသူကို Champion အဖြစ် ရွေးချယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
1st round ပြိုင်ပွဲ
1st round မှာတော့ ပြိုင်ပွဲဝင် အယောက် ၅၀ လက်ခံပြီး ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာပါ။ ဒီပြိုင်ပွဲဝင် ၅၀ ကနေ ဘီယာ ၁ လီတာကို အမြန်ဆုံးသောက်နိုင်တဲ့ ၂၅ ယောက် ကို အရင်ဆုံး ရွေးပါမယ်။ ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ ၂၅ ယောက်က ဘီယာကို ပိုက်နဲ့ စုပ်ပြီး သောက်ရပါမယ်။ ဒီထဲကမှ အမြန်ဆုံးသောက်နိုင်တဲ့ ၁၂ ယောက်က 2nd round (Semi-final) မှာဆက်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2nd round (Semi-final)
2nd round မှာတော့ 1st round မှာအနိုင်ရရှိထားတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် ၁၂ ယောက်ထဲကမှ ဘီယာ ၂လီတာကို အမြန်ဆုံးသောက်နိုင်တဲ့ ၈ ယောက်ကို ပထမအဆင့်အနေနဲ့ ရွေးပါမယ်။ ဒီရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ ၈ယောက်က နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ ဘီယာတွေကို မြည်းသောက်ကြည့်ပြီး အမျိုးအစား မှန်မှန်ကန်ကန် ခွဲပေးရမှာပါ။ မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်နိုင်ပြီး အမှတ်အများဆုံး ရတဲ့ ၆ယောက်ကတော့ နောက်ဆုံး Final Round ကို တက်ပါပြီ။
Final Round ကတော့ တကယ်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံး Round ပါ။ ဒီပွဲမှာတော့ ပထမဦးဆုံး ဘီယာ ၃လီတာကို ၁၅ မိနစ်အတွင်း အမြန်ဆုံးသောက်နိုင်တဲ့ ၄ယောက်ကို ရွေးပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ Beer Pong ဆော့ဖို့အတွက် ၂ ယောက်တစ်ဖွဲ့နဲ့ အဖွဲ့၂ ဖွဲ့ခွဲပါမယ်။ အဖွဲ့၂ ဖွဲ့ထဲက အနိုင်ရသူ ၂ယောက်ကို ရွေးပါမယ်။ အဲဒီ့ နှစ်ယောက်ထဲကမှ ၁၀ မိနစ်အတွင်း ဘီယာ အများဆုံးသောက်နိုင်တဲ့ သူကို Champion အဖြစ် ရွေးချယ်မှာပါ။
Doemal Beerfest ပြိုင်ပွဲ ဝင်မယ့်သူတွေအနေနဲ့ လက်မှတ်ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ The Class Restaurant and Bar ၊ Bar Bondi နဲ့ Doemal Facebook Page ကနေတဆင့် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါတယ်။ လိပ်စာတွေကိုတော့ အောက်မှာ ရေးပေးထားပါတယ်။
ဆုကြေးတွေကတော့ အနိုင်ရရှိတဲ့ ချန်ပီယံအတွက် ဆုငွေ ၁၀ သိန်းနဲ့ ဆုတံဆိပ်တစ်ခု၊ First Runner Up အတွက် ဆုငွေ ကျပ် ၅ သိန်း ချီးမြှင့်မှာပါ။
ကိုယ် ကိုယ်တိုင် မပြိုင်ပဲ ပြိုင်မယ့် သူငယ်ချင်းတွေကို လာအားပေးမယ့် သူတွေအတွက် ဘီယာ Free Flow နဲ့ အရသာ ရှိတဲ့ အစားအသောက် ဘူဖေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ ကျန်သေးတယ်။ Doemal BEERFEST ကို လာမယ့် သူတွေအားလုံး ပျော်နိုင်ဖို့အတွက် Live Music Band ၊ DJ တွေလည်း ထားပေးထားတယ်။ ပျော်ရွှင်စရာ ဂိမ်း တွေ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ပေးမယ့် အစီအစဉ်တွေလည်း ထပ်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ Doemal BEERFEST ကိုသာ လာခဲ့လိုက်တော့နော်။
ပြိုင်ပွဲဝင်ကြေး — 25,000 ကျပ်
ရိုးရိုးဝင်ကြေး – 15,000 ကျပ် (၁ ပွဲစာ Beer Free Flow နဲ့ အစားအသောက်ဘူဖေး)
– 30,000ကျပ် (၃ ပွဲစာ Beer Free Flow နဲ့ အစားအသောက်ဘူဖေး)
ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအနေနဲ့ အဆင့်မတက်ခဲ့ရင် နောက်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်အားပေးဖို့ ငွေကျပ် ၅၀၀၀ နဲ့ လက်မှတ်ရောင်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရောင်းချပေးတဲ့ လက်မှတ်တွေက အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားတာကြောင့် မြန်မြန်ဝယ်ဖို့ လိုတယ်နော်။
ပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ့် ရက်နဲ့ လက်မှတ်တွေဝယ်လို့ရတဲ့ နေရာတွေကိုတော့ အောက်မှာ ပြောပြပေးထားပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်သူငယ်ချင်းတွေထဲက ဘီယာသောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရှိရင် ဖြစ်ဖြစ် Doemal BEERFEST ကိုလာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။
ပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ့်နေရာ၊ နေ့ရက်နှင့် အချိန်များ
1. First Round (Oct 14) – The Class Bar (7pm – 9pm)
2. Second Round (Oct 21) – Bondi Bar (7pm – 9pm)
3. Third Round (Oct 28) – The Beer Factory (7pm – 9pm)
The Class Bar
လိပ်စာ : အမှတ် (၁၆၁)၊ ဝါးတန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
ဖုန်း : 09 44595 0252, +959 44595 0253
လိပ်စာ : International Commercial Centre၊ မြေညီထပ်၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့် ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
ဖုန်း : 09 799 122846
လိပ်စာ : အခန်းအမှတ် (၃၀၉)၊ ၃ လွှာ၊ Building E၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ဆရာစံလမ်းနှင့် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းထောင့်၊ ဗဟန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
ဖုန်း : 09 4230 22181, 09 44566 5211
ဆက်စပ် အကြောင်းအရာများ >>DOEMAL BEERFEST
🎃👻ေၾကာက္မလား၊ ေျခာက္မလား ေဟာလဝင္းေန႔👻🎃
ဘီယာေသာက္ ျပိဳင္ပြဲေတြမွာ အႏိုင္ရေအာင္ ဘယ္လိုေသာက္ၾကမလဲ။